Panamà: Mandrisika Ny Filoha Hanasonia Ny Lalàna Miaro Ny Biby Ireo Mpampiasa Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Angela Munoz
Voadika ny 09 Avrily 2012 6:45 GMT
Nandà ny lalàna 308 miaro ny biby an-trano ny Filoha Ricardo Martinelli. Araka ny nolazain'ny Filoha, entina hanitsiana fomba fandraisana ny lalàna fotsiny izany. Nisioka izy (@rmartinelli) [es] fa, “ny andininy iray amin'ny lalàna ihany no nosakanana mba ahafahan'ny mpianatra manao fanandramana any an-tsekoly. Ao tsara ny zava-drehetra” Na izany aza, naverina any amin'ny Antenimieram-Pirenena ny lalàna ary mbola tsy manana lalàna miaro azy ireo hatrany ny biby fiompy an-trano.
Neken'ny Antenimieram-pirenen'i Panamà ny lalàna vaovao miaro ny biby fiompy. Nankalaza io lalàna vaovao io tamina lahatsoratra feno fihetseham-po ny Animal & Nature Friend Association of Panama [es] ao amin'ny vohikalany:
Mizara ny andinin-dalàna iray manontolo ho an'ny mpiserasera ao amin'ny vohikalan'izy ireo [es] ny Angels of Animals, vondrona iray natoka-tena hanangona ireo biby mirenireny eny an-dalambe sy hitady toerana vaovao hiainany:
Ny 31 Martsa, nanoratra bitsika feno misitery ny Filoha Ricardo Martinelli (@rmartinelli) [es] milaza fa mety handà ny ampahan'io lalàna 308 io ny tenany:
Tsy nandalo fotsiny io raharaha io tany amin'ireo tambanjotra sosialy, nitarika fihetseham-po maro manohitra ny filoha ary mangataka ny famoahana ny lalàna araka izay haingana indrindra. Noforonina ilay tenifototra #ley308 [es] ary nifamporisika ireo mpampiasa Twitter mba hanoratra any amin'ny Filoha ho fepetra fanerena.
Nampiasa ny teny filamatry ny filoha tamin'ny fampielezan-kevitra i Edward Allen (@DjEdwardAllen) [es], “los locos somos más” (“isika vahoaka adaladala no maro an'isa”), ho fitakiana ny fanekena an'ilay lalàna:
“Ny adalam-biby no maro an'isa! Mangataka anao hanasonia ny #ley308!! @rmartinelli @angelesanimales
Nanome toky i Elisa Sánchez (@Elisa_TaoTao) [es] fa tsy hitsahatra hanoratra any amin'ny filoha mandra-panaony sonia ilay lalàna:
TSY HO RERAKA NY MANORATRA AMIN'NY FILOHA AHO MANDRA-PANAOVANY SONIA NY#LEY308, TSY MILA KARAZANA HABIBIANA HAFA IZAHAY
Manontany tena i Amie Lurie (@AmieLurie) [es] ny amin'ireo antony manakana ny filoha tsy hanasonia manontolo ilay lalàna ary mampahatsiahy azy izy fa tsy mitsahatra mivoatra ny fitondrany:
Maninona no miakanakana be amin'ny fanasoniavana? Inona no manakatsakana azy tsy hanao izany?@rmartinelli tsy mikasika ny “jumboferias” sy ny “métro” fotsiny izany. Mbola misy olana hafa goavana kokoa. #ley308
Nefa tsy ny olon-dehetra no mizara izany fahamehana izany raha ny mikasika ny fanekena ity lalàna ity. Ao amin'ny bilaogy Chrisfaw [es], milaza ny mpitoraka bilaogy Chris Faw fa mbola misy olana goavana sy maika kokoa noho izany any Panamà, tahaka ny fampihenana ny herisetra mitombo ao amin'ny firenena, na dia nanazava aza izy fa ezaka tsotra sy mendrika ary goavana ny fanandratana io lalàlana io.
Mbola miandry ny fanekena na fandavana azy izany lalàna izany raha manohy miady hevitra mafy mikasika io fotokevitra io ny olona ao anatin'ireo tambanjotra sosialy. Na ireo fikambanana iraisam-pirenena aza dia voakasik'izany; nangataka ny filohan'i Panamà hanaiky io lalàna io ny Humane Society International, araka ny filazan'ny La Estrella de Panamá (Ilay kintan'i Panamà) [es] :
Sary famantarana avy amin'i WOAW – the world of animal welfare ao amin'ny Flickr, nampiasaina teo ambanin'ny Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)